फेसबुक रोचक - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
सामाजिक सञ्जालमा यसरी छायो राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण र सार्वजनिक विदा
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी पहिलो पटक भारत भ्रमणको लागि आज भारत प्रस्थान गर्नु भएको छ । राष्ट्रपति भारत जाने दिन आज नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिईएको छ । यस्तै राष्ट्रपत..
अन्जु पन्तको ठाउँ अनुसारको पहिरन (फोटो फिचर)
गायिका अञ्जु पन्त कहिले रेकडिङ स्टुडियो त कहिले देश विदेशमा हुने स्टेज कार्यक्रमहरुमा व्यस्त छिन् । अझ भन्ने हो भने त अञ्जुसँग मिडियालाई दिने समय पनि छैन । तर उनले दैनि..
सामाजिक सन्जालमा भाईरल भएका रमाईला तस्विरहरु
रमाईलो तस्वीरहरु हेर्न हामी सबैलाई रमाइलो लाग्छ । हामी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका तस्वीरहरु एकान्तमा हेरेर निकै हाँँस्ने गर्छौँ र पछि साथी भाईहरुलाई पनि सेयर गर्ने गर्..
आर्यनसँग मस्ती गरिरहेकी प्रियंकाको ठूलो चुप्पा कसको लागि हो ? फेसबुकमा प्रियंकाको अनेक रुप
नेपालकी व्यस्त अनि हट नायिका प्रियंका कार्की यतिखेर ‘वटरफ्लाई’ चलचित्रमा व्यस्त रहेकी छिन् । ‘के म तिम्रो होईन र’ बाट डेब्यू गरेका आर्यन छोटो समयमा राम्रो कलाकारको रुपम..
हेर्नहोस प्रेम दिवसको शुभसाईत
भ्यालेन्टाईन डे अर्थात प्रेम दिवसको मान्यता नेपालमा पनि बढ्दै गईरहेको छ । विषेश त युवायुवतीहरुले यो दिवसलाई मान्ने गर्दछन् । फेब्रवरी १४ धेरैको मनमा बस्न सफलभएको दिनहो ..
बेहुली हुदै बर्दीया सम्म,मृत्युको खबरले रेखा परिन अचम्म —फेसबुकमा रेखाको अनेक रुप
नायिका रेखा थापा कलाकारिता ,राजनिति,निर्देशक ,निर्मात्री देखि हरेक विषयमा चासो दिने नायिका हुन् । उनको यहि काम र मेहनतको कारण पनि १५ वर्ष देखि कलाकारिता क्षेत्रमा एक रु..
सरस्वती पूजाको दिन कस्ले के के भने ? हेर्नुहोस तपाईको पनि पर्न सक्छ
आज श्री पञ्चमी अर्थात सरस्वती पूजा हो । आज सरस्वती पूजाको दिन मन्दिर ,विद्यालयहरु सरस्वतीको मन्दिर बनाएर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि सरस्वतीको पुजा गरिन्छ । आजै ससाना बालबालिकाहरुलाई अक्षारम्भ गर्ने , नाक कान छेड्ने , बाछो गोरु जोत्ने लगायतका काम गर्न शुभ मानिन्छ । सरस्वती पुजाको दिन सामाजिक संजालमा विभिन्न व्यक्तिहरुले फरक—फ..
हेर्नुभयो जैले रिसाउनीमा मुस्कान पासा र फतौरी बुढीको नृत्य ?
नेपाली सिनेमा पुरानो डुङगाको नीर जैलै रिसाउनी बोलको गीत अहिले भाईरल बनेको छ । यो गीतमा अभिनेता दयाहाङ र अभिनेत्री प्रियंकालाई फिचरिङ्ग गरिएको छ । यो गीत सुन्दा जति आनन्द आउँछ नाच्दा पनि त्यत्तिकै आनन्द आउँछ । बच्चा देखि वृद्धासम्म सबैलाई मन परेको गीत नीर जैले रिसाउनीमा अहिले मुस्कानपासा सिताराम कट्टेल र फतौरी बुढी कुञ्जना [&hell..
फेसबुकमा भेटिएको बाको बारेमा लेखिएको मनछुने कविता
आमालाई धर्ती भन्नेहरुले बालाई कहिल्यै आकाश भनेनन् मैले धेरै पढेँ आमाका बेदनाका कथाहरु तर कहिल्यै पढिन बाका अनुहारमा सलबलाएका दुस्खका बक्र रेखाहरु धेरै पटक कविहरुले आमाकै तारिफमा कबिता कोरे आमाकै गीत संगीत भरे आमालाई धर्ती भन्नेहरुले बालाई कहिल्यै आकाश भनेनन् र त बा सँधै ओझेल परे । बारीको डीलमा चुपचाप ठिंग उभिएको बूढो रुख झैं [&h..
फेसबुक प्रोफाइलमा यी १० कुरा बिर्सेर पनि नराख्नुस– फेसबुक मालिक जुकरबर्ग
परिवर्तनशील समय संगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बन्दै गईरहेकोे छ । तर प्रयोग गर्न नजान्दा यो तपाईको जिवनभरको समस्या पनि बन्न सक्छ । तपाईँ हाम्रो निजि जानकारी फेसबुकमा हुने भएका कारण मानिसहरुले यसको गलत फाइदा उठाउन सक्छन्, अर्थात उठाउने गर्दछन् । यसबाट धेरैलाई समस्या भइरहेको पनि छ । आज हामी तपार्ईलाई फेसबुकमा ..
फेसबुकमा भेटीएको सुन्तलाको कथा ,१ मिनेट समय छ भने पढ्नुस्, मज्जाले हाँस्नुहोस्
५ वर्षमा २५ चोटी लोकसेवा र निगम र बैँकर संस्थान आदिको परीक्षा दिइयो, कहिल्यै पास भइएन । मैले सरकारी जागिर खाने आश मारेको थिएँ, २६ औँ पटकमा कताबाट फ्याट्ट ३ न्यायसेवा को ३ डिठ्ठामा लिखितमा नाम निस्केछ । आगनका डिलाँ गएर सात फन्को नाचेँ । अन्तर्वार्ताको दिन धनकुटा , लोकसेवाको कार्यालय गएँ । अन्तर्वार्तामा उपसचिव […]
फेसबुक मालिकले दिनमा कमाउँछन् ४६ करोड ,संसारका १० धनी व्यक्तिको दैनिक कमाई कती ?
४६ करोड कुनै सानो रकम हैन । यो रकम जीवनभरमा कमाउन पनि मुश्कील पर्छ । तर फेसबुक मालिक जुगबर्गले एक दिनमै यति कमाउँछन् । जुगरबर्ग कमाईको मामीलामा संसारका सबैभन्दा धनी बिल गेटस् भन्दा पनि अघि गएका छन् । फोेब्र्समा छापिएको खबर अनुसार मार्क एक दिनमा ४६ करोड २ लाख नेपाली रुपैयाँ कमाउँछन् । उनको यो […]
फेसबुक मालिकको सुरक्षा खर्च कति ?
फेसबुकको आम्दानीको कति हिस्सा यसका मालिक मार्क जुकरवर्गको सुरक्षामा खर्च होला ? हालै सार्वजनिक एक विवरणका अनुसार गएको वर्ष उनको सुरक्षा खर्च ४.२६ मिलियन अर्थात् करिब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै पछिल्ला तीन वर्षमा कूल खर्च १२.५ मिलियन अर्थात् करिब १ सय ३३ करोड रुपैयाँ उनको सुरक्षाका लागि खर्च भएको छ। सोसल नेटवर्किङ [&hel..
एक सोधका अनुशार, बढी सेल्फी खिच्ने ब्यक्ति अहंकारी भएको ठहर
सामाजिक संजालमा सेल्फी ट्रेण्ड अहिले चल्तीमा छ । हामीले खिच्ने सेल्फीले हाम्रो आनीबानीसँग सम्बन्ध राख्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसरी बढी सेल्फी अपलोड गर्नेहरु, स्वभावमा बढी अहंकारी हुने गरेको दक्षिण कोरियास्थित कोरिया विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुको अध्ययनले देखाएको हो । साथै यस्ता मानिसहरु आफुले अपलोड गरेका सेल्फीमा आउने कमेन्..